Arbaco, Oct 28, 2020-Gudoomiyaha gobolka Sool oo ka hadlay sababta loo masaafuriyey Abuukar Qaad-diid – LaacibOnline
Arbaco, Oct 28, 2020-Gudoomiyaha gobolka Sool oo ka hadlay sababta loo masaafuriyey Abuukar Qaad-diid
Gudoomiyaha gobolka Sool oo ka hadlay sababta loo masaafuriyey Abuukar Qaad-diid
Arbaco, October, 28, 2020 (HOL) – Gudoomiyaha Gobolka Sool Cabdiqani Jiidhe ayaa sheegay in Qaad-diid uu sifo qaldan ku soo galay magaalada Laascaanood xarunta Gobolka Sool.
Gudoomiyaha oo war saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu si aad ah u dhaliilay Qaadiid isagoo sheegay in uu doonayey inuu shirar ku qabto magaalada isagoo aan ogolaansho u haysan.
“Waxaan ahay masuulka ugu sareeya gobolka wax xog ah oo aan ka hayey imaanshihiisa ma jirin, mida kale socodkiisu kama madhnayn siyaasad, dhowaan waxaa uu amaanayey Farmaajo, shalayna Cabdiweliga Puntland, nimankaana kala mabda baan nahay” ayuu yidhi Jiidhe waxaanu meesha ka saaray in wax ogolaansho ah uu soo weydiistey maamul ahaan.
Hadalka gudoomiyaha ayaa yimi markii ciidanka Boolisku ay magaalada Laascaanood ka masaafuriyeen Abuukar Qaad-diid taas oo baraha bulshada si aad ah loogu hadal hayo.
10/28/2020 3:58 AM EST
Arbaco, October, 28, 2020 (HOL)- Qaramada Midoobay ayaa sheegtay, in ay khatar ku jirto nolosha kumannaan carruur ah oo u dhashay dalka Yemen, sababo la xiriira nafaqo-darro aad u daran oo ku heysata qeybo ka mid ah koofurta Yemen.
10/28/2020 2:28 AM EST
Arbaco, October, 28, 2020 (HOL) – Mudanayaasha Baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle ayaa goordhaw looga yeeray xarunta guddiga farsamadda iyo soo xulista Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle si loo siiyo aqoonsiyo isla markaana loo dhaariyo si ay waajibaadkooda shaqo u guda galaan.
← Africa: During RSF’s First Visit to Somalia, the Prime Minister Announces a Moratorium On Arrests of Journalists
Culture of impunity in Somalia continues to grow →
Talaado, Jun 23, 2020-Al-shabaab oo sheegtay qaraxii maanta ka dhacay saldhigga ciidamada ee Turkey-Som
Axad, Oct 18, 2020-Taliska 27-aad ee ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay dileen 24 dagaalame oo Al-shabaab ah
Jimco, Sept 11, 2020-Madaxweyne Qoor-qoor iyo Xasan Shiikh oo Muqdisho ku kulmay